ကိုယ့်ကြောင့် မိသားစုကို ရောဂါမကူးစေဖို့ ဒါလေးတွေ လိုက်နာပါ - YOYARLAY Digital Media and News
အခုလတ်တလောမှာ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါလို့ ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ COVID-19 ကြောင့် အများကြားမှာ ထိတ်လန့်စိုးထိတ်မှု တွေဖြစ်နေကြပါတယ်။
အခုဆိုရင် လူတော်တော်များများက နေအိမ်တွေကနေ အလုပ်လုပ်နေကြတာရှိသလို မဖြစ်မနေလုပ်ငန်းခွင်ကို သွားနေရသူတွေလည်း ရှိမှာပါ။ ဒီတော့ ကိုယ့်ကြောင့် ကိုယ်မိသားစုဝင်တွေ ချစ်ခင်ရသူတွေမှာ ရောဂါပိုး ကူးစက်တာတွေ မဖြစ်စေဖို့ ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကို ဒီဆောင်းပါးလေးထဲမှာ တူတူကြည့်ရအောင်လား……….
မိမိကြောင့် မိသားစုဝင်တွေကို ရောဂါမကူးစက်စေဖို့ ဘာတွေလုပ်ဆောင်ရမလဲ……
ကိုယ်ကြောင့် မိသားစုဝင်တွေကို ရောဂါမကူးစက်စေဖို့ဆိုရင် အပြင်က ပြန်လာတိုင်း
အိမ်မွေး တိရစ္ဆာန်လေးရဲ့ ခြေဖဝါးလေးတွေကိုလည်း သန့်စင်ပေးပါ – COVID_19 က တိရစ္ဆာန်လေးတွေကနေတဆင့် မကူးစက်နိုင်ဘူး ဆိုပေမယ့် အခြား ရောဂါပိုးတွေကတော့ လမ်းလျှောက်ထွက်လာတဲ့ သူတို့လေးတွေရဲ့ ခြေဖဝါး၊ လက်ဖဝါးလေးတွေမှာ ကပ်တွယ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အပြင်က ပြန်လာတဲ့ သူတို့လေးတွေကိုလည်း ခြေဖဝါး၊ လက်ဖဝါးလေးတွေကို သန့်စင်ပေးပါ။
ဒါတွေအပြင် ရောဂါကို ကာကွယ်ဖို့အတွက်
• တစ်ခုခုကို ထိတွေ့ပြီးတိုင်းလက်ဆေးပါ။ အစားမစားခင်လက်ဆေးပါ။
• အသုံးပြုနေတဲ့ အရာဝတ္ထုတွေကို နေ့စဉ် သန့်စင်ပိုးသတ်ပါ။
• လူစူလူဝေးဖြစ်တဲ့နေရာတွေကို မသွားပါနဲ့။
• နှာချေ၊ချောင်းဆိုးတဲ့အခါတိုင်း နှာခေါင်း နဲ့ ပါးစပ်ကို တစ်သျှူးနဲ့ သေချာအုပ်ပါ။ ပြီးရင် တစ်သျှူးကို အမှိုက်ပုံးထဲ သေချာ စွန့်ပစ်ပါ။
• လူတိုင်းနဲ့ ဖြစ်နိုင်လျှင် ၃ ပေအကွာမှာနေပါ။
• အဖျားကြီးမယ်၊ ချောင်းခြောက်ဆိုးမယ်။ ခြေလက်တွေမသယ်ချင်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် ကုသရေးဌာနတွေဆီ ချက်ချင်း အကြောင်းကြားပါ။
ကဲ…. ကိုယ့်ကြောင့် အခြားသူတွေကို ရောဂါမကူးစက်အောင် အခုပြောခဲ့တဲ့ နည်းလေးတွေကို အသုံးပြု ကာကွယ် ကြည့်ရအောင်လား။ ရာနှုန်းပြည့်မဟုတ်ပေမယ့် အချည်းအနှီးမဖြစ်တာတော့ အသေအချာပါပဲနော်။ ကာကွယ်ခြင်းသည် ကုသခြင်းထက် ပိုထိရောက်ပါ၏။
Previous Previous post: တီးတိန်​လူနာနှင်​့ ထိ​တွေ့မိသူများအနက်​ ၂၆ ​ဦးကို Home Quarantine လုပ်​ထားဟု ဆို
Next Next post: အိန္ဒိယတစ်နိုင်ငံလုံးကို ပိတ်ဆို့လိုက်ပြီ
ပိတ်ရက်မှာကိုယ်နေထိုင်တဲ့ပုံစံနဲ့ အလုပ်မှာသွားနေနေလို့မရပါဘူး။ အလုပ်ဆီကိုလာတဲ့အချိန်မှာ လုပ်ငန်းခွင်ဟာ လုံးဝကို ကွဲပြားခြားနားပါတယ်။ Post Views: 2,718